2003 – Year – Burmese Subtitle
In Hell (2003) အခု Mokharက IMDb Rating 6.2 ရှိတဲ့ မင်းသားကြီး ဗန်ဒိန်း အဓိကပါဝင်ထားတဲ့ In Hell ဆိုတဲ့ movie လေးကို ဘာသာပြန်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးက ***အမေရိကန်နိုင်ငံသား Kyle အဖြစ်လဲ ဗန်ဒိန်းဟာ ရုရှားနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် တစ်နေ့သူ့မိန်းမ အသတ်ခံရပြီး လူသတ်သမားကို မိပေမယ့် ငွေများတရားနိုင်ဆိုသလို လူသတ်သမားက အမှု့လွတ်သွားခဲ့ပါတယ် kyle ဟာ တရားရုံးမှာပဲ တရားခံကို သတ်ပလိုက်တဲ့အတွက် သူ့ကို ရုရှားထောင်ကို တစ်သက်တစ်ကျွန်း ပို့လိုက်တဲ့အခါ... ***ထောင်ထဲမှာ game တခုလို ထောင်သားအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ခိုင်းပြီး အဲ့အပေါ် အာဏာပိုင်တွေက အလောင်းအစား ပြုလုပ်ကြပါတယ် kyle တစ်ယောက် အဲ့ game ထဲရောက်သွားတဲ့အခါ..... * တကယ့်ကိုမှ ဇာတ်လမ်းက ကျဉ်းကျဉ်းလေးဆိုပေမယ့် ထောင်သားအချင်းချင်း ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုပ်တာတွေ၊ ရောင်းစားတာတွေ၊ တိုက်ခိုက်တာတွေ က တကယ့်ငရဲခန်းလိုပါပဲ kyel တစ်ယောက် တိုက်ခိုက်ရတာကို ...
IMDB: 6.2/10 17,937 votes
Bruce Almighty (2003) ဒီကားလေးကတော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ရုံတင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့အထိ ဟောင်းပေမယ့်ကောင်းနေဆဲ ဟာသဇာတ်ကားလေးပါ... အညွှန်းရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ Bruce Nolanနဲ့ Grace Connelly တို့ဟာ ​အတူနေ ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး Bruce က Reporter တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် Presenter နေရာကိုတက်ချင်တဲ့Bruceဟာ ကြိုးစားသမျှတလွဲတွေချည်းဖြစ်နေတဲ့အခါ Godကိုပဲအပြစ်တင်နေတက်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာသူနဲ့အပြိုင်အဆိုင် Presenterနေရာကိုလိုချင်နေတဲ့ Evanဆိုတဲ့လူက Presenterနေရာကိုရသွားတဲ့အခါမှာတော့ Bruceတစ်ယောက် Live Interview တစ်ခုမှာထပေါက်ကွဲပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့သူအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာ Godကို အပြစ်တင်ပါတော့တယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်ရောက်တဲ့အချိန် သူ့ Pager မှာ ဖုန်းဝင်လာပြီး ဖုန်းနံပါတ် 555-0123 လို့ပေါ်နေပါတယ်။ ဖုန်းပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူ့ကို အလုပ် ခန့်မှာဖြစ်လို့ အရောက်လာဖို့ချိန်းဆိုပါတယ်။ သူရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ထင်ထားသလို ဖြစ်မနေပဲ သူ့ကိုအလုပ်ခန့်ဖို့ခေါ်လိုက်တာကတော့ God ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာ ကို တွေ့လိုက် ရပါတယ်။ God က သူ့ကို ခဏခဏအပြစ်တင်နေတဲ့ Bruce ကို သူ့ရဲ့ ပါဝါတွေ အကုန်လွှဲပေးပြီး God ရဲ့အလုပ်ကို လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ တစ်ပတ်အတွင်း သူ့ထက်သာအောင်လုပ် လို့ ပြောပါတယ်။ Godရဲ့အစွမ်းတွေရသွားတဲ့ Bruceတစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲ။ Godခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုရော ပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာတော့ BSကတင်ဆက်လိုက်တဲ့ ...
IMDB: 6.7/10 356,481 votes
The Classic (2003) The Classic (2003) ****************** လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်လာရင် မလဲမသွေ ကြုံတွေ့ရမယ့် အရာတစ်ခု ရှိနေမှာပါ။ အဲဒါကတော့ အချစ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ဦးချင်းဆီမှာ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်တွေ ရှိနေသလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖေတွေ အမေတွေ အဖိုးတွေ အဖွားတွေ တစ်ဦးချင်းဆီမှာလဲ အချစ်ဆိုတာ ရှိနေမှာပါ။ အချစ်ဆိုတာ ဝါဒတစ်ခု မဟုတ်သလို စနစ်တစ်ခု မဟုတ်တဲ့အတွက် ခေတ်တိုင်း ခေတ်တိုင်းမှာ ရှင်သန်နေမယ့် အရာတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာတော့ အများကြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးအစားအများကြီးရှိမယ့် အချစ်တွေထဲကမှ တွေးမိတိုင်း ရင်ထဲနွေးကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖိန်းကနဲ ဖြစ်ရတဲ့ အချစ်မျိုးက ဘယ်လိုအချစ်မျိုး ဖြစ်မလဲ။ ကျွန်တော့်အမြင်အရဆို ရင်ခုန်တတ်စမှာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ရတဲ့ ပထမဆုံးအချစ်ဟာ အနူးညံ့ဆုံးနဲ့ ရင်အခုန်ရဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ထိတွေ့ရတဲ့အချစ်ဟာ ရိုးသားဖြူစင်ပါတယ်။ ဘာအရောင်မှ မပါသလို ဘာမျှော်လင့်ချက်မှလဲ မရှိပါဘူး။ တဏှာပေမတွေလဲ ...
IMDB: 7.8/10 7,519 votes
The League of Extraordinary Gentlemen (2003) လူစွန့်စားအလန်ကွာတာမိန်းကိုကြားဖူးပါသလားမကြား ဖူးဘူးဆိုရင်ဒီကားလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါခိုက်သွားမှာသေချာပါတယ်လို့အာမခံပါတယ်ဒီကားလေးဟာရုပ်ရှင်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲပါဝင်တဲ့ဇတ်ကောင် တွေဟာသာမန်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးလူသွေးစုပ်တဲ့ဗန်ပိုင်းယားတွေခန္ဓာကိ်ုယ်ကိုဆေးသောက်ပြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့သူအဖြစ်ပြောင်းနိုင်တဲ့အဗန်ဂျာကားထဲကဟော့စ် ဆန်ဆန်သူတွေကိုယ်ပြောက်လူတွေပါဝင်ထားတဲ့စူပါဟီးရိုးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါပဲသူတို့ကိုဦးဆောင်မယ့်သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟီးရိုးကြီးအလန်ကွာတာမိန်းပါပဲခင်ဗျ လူသာမန်တွေမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုကြုံတွေလာရတဲ့အခါအလန်ကွာတာမိန်းဆိုတဲ့မုဆိုးကျော်ကြီးကဦးဆောင်ပြီးဖြေရှင်းပေးသွားမှာပါဒီဇတ်ကားထဲမှာအလန်ကွာတာမိန်းအဖြစ်007မင်းသားဟောင်းကြီးရှောင် ကွန်နရီကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ရှောင်ကွန်နရီရဲ့သ ရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေအလွန်မိုက်တဲ့အက်ရှင်ခန်းတွေကိုတဝကြီးခံစားရမယ့်ဒီဇတ်ကားကိုfofပရိတ်သတ် တွေအတွက်ရှယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဘေကုန်ရကျိူးနပ်စေမယ့်ဇတ်ကား ကောင်းလေးပါပဲ credit fof
IMDB: 5.8/10 160,679 votes
Finding Nemo (2003) အသစ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဟောင်းလေးကို မမှီဘူးဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်းပါပဲ ဒီတစ်ခါတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အဟောင်းထဲက အကောင်းလေး တစ်ကားကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် … နီမို (Nemo) ဆိုရင် မသိသူမရှိသလောက်ပါပဲ … အောင်မြင်မှုများစွာကိုလည်း ရရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ် … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ Clown fish လေးဖြစ်တဲ့ မိတဆိုးသားလေး နီမိုတစ်ကောင် သူနေထိုင်ရာ သမုဒ္ဒရာကြီးထဲကနေ လူတစ်ချို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါ ဖခင်ဖြစ်သူက လိုက်လံရှာဖွေတဲ့ ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီသားပျောက်ရှာပုံတော်မှာ စွန့်စားခန်းတွေ တစ်လှေကြီးပါဝင်ပြီး ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတာမို့ ပရိတ်သတ်တွေ သဘောကျနှစ်ခြိုက်ကြမှာ အသေအချာပါပဲ … ဒီတော့ အားပေးကြပါဦး.. ဘာသာပြန်သူနဲ့အညွှန်းရေးသူကတော့ ရဲကျော်ထက်ဖြစ်ပါတယ် Credit
IMDB: 8.1/10 888,575 votes
Shanghai Knights (2003) (Unicode) ဂျက်​ကီချန်​း ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ဇာတ်​ကား​ကောင်​းတစ်​ကားနဲ့မိတ်​ဆက်​​ပေးပါရ​စေ Shanghai Knights ဇာတ်​ကားဟာ 2003 ခုနှစ်​ကထွက်​ရှိထားတဲ့ တရုတ်​အ​မေရိကန်​အက်​ရှင်​ကားတစ်​ကားဖြစ်​ပါတယ်​ Imdb rating 6.2/10ရရှိထားပြီး Jackie Chan….Owen Wilson…Donnie Yan…Aaron Taylor စတဲ့သရုပ်​​ဆောင်​ကြီး​တွေပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​ ဇာတ်​လမ်​းအကျဉ်​းက​တော့ Chon Wang ဟာ အမိ​မြေတရုတ်​နိုင်​ငံကိုစွန်​့ခွာပြီး အ​မေရိကန်​နိုင်​ငံ Carson မြို့​လေးမှာ အရာရှိတစ်​​ယောက်​အဖြစ်​အသက်​​မွေးဝမ်​း​ကျောင်​းသူပါ…. ဖခင်​ဖြစ်​သူက​တော့ တရုတ်​​တော်​ဝင်​နန်​းတွင်​းတံ​ံဆိပ်​ကိုထိန်​းသိမ်​းရသူတစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး သားလုပ်​သူကိုမနှစ်​မြို့သူတစ်​ဦးဖြစ်​ပါတယ်​…. ​တော်​လှန်​ပုန်​ကန်​မှု​တွေဖြစ်​တဲ့အချိန်​မှာ သူပုန​်​​တွေက Chon Wang အ​ဖေ့ကိုသတ်​ပြီး တံဆိပ်​တုံးလုယူသွားခဲ့ပါတယ်​….. ဒီဖြစ်​ရပ်​​ကြောင်​့ Chon Wang ဟာ ပါတနာRoy O’Bannonနဲ့ပူး​ပေါင်​းပြီး လူသတ်​သမား​တွေထွက်​​ပြေးရာလန်​ဒန်​ကို လိုက်​သွားပါ​တော့တယ်​….. ​နောက်​ဆုံးမှာ အ​ဖေ့အတွက်​ကလဲ့စား​ချေနိုင်​မှာလား….တရားခံ​တွေက​ရောဘယ်​သူ​တွေလဲဆိုတာ ဆက်​လက်​ကြည်​့ရှုလိုက်​ပါ…. Review Credit to CM (Zawgyi) ဂ်က္​ကီခ်န္​း ပရိသတ္​​ေတြအတြက္​ ဇာတ္​ကား​ေကာင္​းတစ္​ကားနဲ႔မိတ္​ဆက္​​ေပးပါရ​ေစ Shanghai Knights ဇာတ္​ကားဟာ 2003 ခုႏွစ္​ကထြက္​႐ွိထားတဲ့ တ႐ုတ္​အ​ေမရိကန္​အက္​႐ွင္​ကားတစ္​ကားျဖစ္​ပါတယ္​ Imdb rating 6.2/10ရ႐ွိထားၿပီး Jackie Chan….Owen Wilson…Donnie Yan…Aaron Taylor စတဲ့သ႐ုပ္​​ေဆာင္​ႀကီး​ေတြပါ၀င္​သ႐ုပ္​​ေဆာင္​ထားပါတယ္​ ဇာတ္​လမ္​းအက်ဥ္​းက​ေတာ့ Chon Wang ဟာ အမိ​ေျမတ႐ုတ္​ႏိုင္​ငံကိုစြန္​႔ခြာၿပီး ...
IMDB: 6.2/10 95,268 votes
Underworld (2003) 2003 ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့ျပီး Underworld ဇာတ္ကားရဲ႕ ပထမဆံုးပြဲဦးထြက္ဇာတ္ကားဆိုရင္လဲ မမွားပါဘူးဗ် ဒီကားမွာပဲ Underworld ပရိတ္သတ္ေတြက အသည္းခိုက္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့ၾကျပီး ေနာက္ထပ္ရိုက္ကူးမဲ့ Underworld2, 3, 4,5တို႕အတြက္ ပရိတ္သတ္အားေပးမႈက တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့တယ္ဆိုရင္လဲ မမွားပါဘူး ဇာတ္လမ္း အက်ဥ္းေလးကေတာ့ ဗန္ပိုင္းယား ေသမင္းတမန္စစ္သည္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆယ္လီဟာ ဗန္ပိုင္းယားေတြနဲ႕ သမန္း၀ံပေလြေတြၾကားထဲက ပဋိပကၡအတြက္ တိုက္ခိုက္ရငး္ သမန္း၀ံပေလြျဖစ္သူ မိုက္ကယ္နဲ႕ ခ်စ္ၾကိဳးသြယ္ခဲ့မိပါတယ္ ဒီလိုနဲ႕ မိုက္ကယ္ နဲ႕ ဆယ္လီ တို႕ ၂ေယာက္ အခ်စ္ခရီးလမ္းက ေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္ပါ့မလား ဆယ္လီကေကာ ရန္သူတျဖစ္လဲ ခ်စ္သူနဲ႕ဘယ္လိုေတြမ်ားဆက္လက္ ၾကံဳေတြ႕ရမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဆက္လက္ၾကည့္ရွဴလိုက္ပါဦးခင္ဗ်ာ Credit Review: ဇာတ္ကားအၫႊန္းအား CM မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္
Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life (2003) သတိၱရွိတဲ့ ျဗိတိသွ်လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးဘူမိေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ လာရာခေရာ့ဖ္ဆိုသူက တကယ့္ကုိအေရးၾကီးတဲ့ ရွာေဖြမွဳတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ဒဏၰာရီထဲက ပန္ဒိုယာမင္းသမီးေလးရဲ႕ ေသတၱာကုိရွာေဖြဖို႕အတြက္ လမ္းညႊန္ထားတဲ့ ေက်ာက္ေဘာလံုးကိုရွာေဖြခဲ့ျခင္းပါပဲ။ ကံမေကာင္းစြာနဲ႕ပဲ လူကုိေသေစတဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ေတြ လက္နက္ေတြျပဳလုပ္သူ ေဂ်ာ္နသန္ရီးစစ္ဆိုတဲ့ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦး လက္ထဲကုိ ေက်ာက္ေဘာလံုးက ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႕ လာရာလဲ စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းတဦးျဖစ္ျပီး သူ႕ရဲ႕ အရင္ရည္းစားေဟာင္းတဦးျဖစ္သူ တယ္ရီ ရွရီဒန္ဆိုတဲ့ လူကုိ အကူအညီေတာင္းျပီး ရီးစစ္ဆီက ေက်ာက္ေဘာလံုးကုိ ျပန္ရယူဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ရျပန္တယ္။ သူတုိ႕၂ေယာက္ ေက်ာက္ေဘာလံုးကညႊန္ျပတဲ့ ပန္ဒိုယာေသတၱာရွိတဲ့ေနရာကုိ ဘယ္လို စြန္႕စားခန္းေတြဖြင့္ျပီးသြားၾကမယ္.. ရီးစစ္လက္ထဲကေန ေက်ာက္ေဘာလံုးကုိ ျပန္ယူႏုိင္ပါ့မလားဆိုတာ ဇာတ္လမ္းေလးကုိၾကည့္ရင္း ဆက္လက္ရွဳစားၾကပါဦးလို႕ေျပာရင္း ခံစားေပးၾကပါဦးလို႕…. အညြွန္း Credit Translator -- Kyaw Lwin Htun Encoder -- K#/4nt_M1nn_K0
The Italian Job (2003) The Italian Job (2003) "Trust everyone... Just not the devil inside of them." ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးကေတာ့ ဇာတ္ကားၿပီးတဲ့အထိ စိတ္ထဲစြဲက်န္ေနတာပါ။ ေနာက္ႀကံဳတိုင္း ဆင္ျခင္မိတာက မင္းကိုေတာ့ ယံုပါတယ္ကြာ မင္းရဲ႕ေလာဘကိုပဲ မယံုတာပါလို႔ စိတ္ထဲမွာ ေျပာၾကည့္မိပါတယ္။ ဒီလို အေျပာမ်ိဳးေတြပဲ ပါတဲ့ ေတာ္ကီမ်ားတဲ့ ဇာတ္ကား လံုးဝမဟုတ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ world Stunt Award(2014) အျပင္ အျခားဆု ၇ ဆု ရရိွခဲ့တာက သက္ေသျပေနပါတယ္။ ဒီကားမွာ မေမ့ႏိုင္ဆံုးအခန္းကေတာ့ Mini Cooper ကားေလး ၃ စီးနဲ႔ ေျပးတဲ့အခန္းပါပဲ။ အဲဒီ Mini Cooper သံုးစီးမွာ ၂ စီးက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ၁ စီးက Mini Cooper S အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Los Angles ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမေအာက္လမ္းစနစ္က ေလာင္စာသံုး ...
IMDB: 7.0/10 319,511 votes
Johnny English (2003) Mr.Bean လို႔လူသိမ်ားတဲ့ မင္းသားႀကီး Rowan Atkinson က Agent Johnny English ေနရာကေနၿပီးေတာ့ သရုပ္ေဆာင္ထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ IMDB 6.2 ရရွိထားတဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း ------------------- ဂြ်န္နီအဂၤလိပ္ ကအစပိုင္းမွာေတာ့ ေအးဂ်င့္ေတြကို ကူေပးရတဲ့လက္ေထာက္အဆင့္သာသာပါ။ ဒါေပမယ့္ မထင္မွတ္ဘဲ ဂြ်န္နီ ေပးလိုက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ ေအးဂ်င့္ ဝမ္း အားထားရဆံုး ေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္ဟာ ေရငုတ္သေဘၤာရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုတ္မသိေတာ့တာေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈး လိုက္ရပါေတာ့တယ္။ ေအးဂ်င့္ဝမ္း ဆံုးရံႈးမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မသာမသူမ်ားဟာ အေခါင္းထဲမွာ ဗံုးထည့္ၿပီးေတာ့ အျခားေအးဂ်င့္ေတြကိုပါ သတ္ပစ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ ေအးဂ်င့္ေတြအားလံုး ေသဆံုးသြားတဲ့အတြက္လက္ေထာက္အဆင့္ကေနၿပီးေတာ့ ေအးဂ်င့္ဘဝကိုရေတာ့မယ္ ဂြ်န္နီတစ္ေယာက္ တာဝန္ေတြကိုဘယ္လိုေျပာင္ေျမာက္စြာထမ္းေဆာင္မယ္ဆိုတာကို ဟာသေလးနဲ႕ေရာေႏွာၿပီးျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားဟာ ၾကာေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ BS ကေနၿပီး Blu-Ray 1080p ႏွင့္ Audio 6CH ျဖင့္အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ File Size – 1.62 GB Quality – Blu-Ray 1080p 6CH Running Time – 1h 27min Format – mkv Genre – Action, Adventure, Comedy Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – Zaw Min Thein Encoded By ...